WINDOWS 10 CALCULATOR TSY MIASA - WINDOWS - 2019
Windows 10 calculator tsy miasa
Ho an'ireo mpampiasa sasany, ny kalkulator dia iray amin'ireo fandaharam-potoana ampiasaina indrindra, ary noho izany dia mety hiteraka olana goavana amin'ny fanombohana ao amin'ny Windows 10 ny tranga lehibe.
Ao amin'ity boky ity, amin'ny antsipiriany momba ny tokony hatao raha toa ka tsy miasa ao amin'ny Windows 10 (tsy manokatra na manaka avy hatrany aorian'ny fanombohana) ny toerana misy ny calculator (raha toa ka tsy azonao atao ny manomboka izany), ahoana no fomba ampiasanao ny dikan-teny taloha momba ny calculator sy ny hafa Fampahalalana izay mety ilaina amin'ny sehatry ny fampiasana ny fampiharana "Calculator".
Aiza ny calculator amin'ny Windows 10
Inona no tokony hatao raha tsy manokatra ny kaompiro?
Ahoana ny fametrahana ny kalko taloha amin'ny Windows 7 ka hatramin'ny Windows 10
Aiza ny kalkulateur amin'ny Windows 10 sy ny fomba handaminana azy
Ny kalkulator ao amin'ny Windows 10 dia efa hita amin'ny endritsoratra amin'ny endritsoratra ao amin'ny menio Start ary ao amin'ny lisitry ny programa rehetra ao amin'ny litera K.
Raha toa ka tsy afaka mahita azy any ianao, dia azonao atao ny manomboka manoratra ny teny hoe "Calculator" ao amin'ny fikarohana fikasana hanombohana ny kalkulator.
Toerana iray hafa ahafahanao manomboka ny kalko Windows 10 (ilay dika mitovy dia azo ampiasaina hanamboarana takelaka kalkulatora eo amin'ny desktop Windows 10) - C: Windows System32 calc.exe
Raha izany no izy, raha tsy afaka mahita ny fampiharana ny fikarohana na ny "Menu Start", dia mety voafafa izany (jereo ny Fomba fandroana ny fampiharana Windows 10). Ao anatin'izany toe-javatra izany, azonao atao ny mamerina mora foana izany amin'ny alàlan'ny fivarotana rindrambaiko Windows 10 - eo ambanin'ny anarana hoe "Windows Calculator" (ary any dia hahita kalko maro hafa azonao atao ihany koa ianao).
Mampalahelo fa matetika no mitranga izany na dia miaraka amin'ny calculator aza, tsy manomboka na mifarana avy hatrany aorian'ny fandefasana azy, andeha hizaha fomba azo hamahana io olana io.
Inona no tokony hatao raha tsy mampiasa Windows 10 ny calculator?
Raha tsy manomboka ny kaomisara, dia azonao atao ny manandrana ireto hetsika manaraka ireto (raha tsy mahita hafatra ianao milaza fa tsy azo alaina ao amin'ny kaonty Administrator natsangana izy io, amin'ity tranga ity dia tokony hiezaka mamorona mpampiasa vaovao misy anarana hafa "Administrator" ary asaivo manomboka eo ambaniny. Jereo ny fomba hamoronana mpampiasa Windows 10)
Mandehana any amin'ny Start - Settings - System - Applications and Features.
Mifidiana "Calculator" amin'ny lisitry ny fampiharana ary tsindrio ny "Advanced Options."
Kitiho ny "Reset" ary hanamafy ny famerenana.
Aorian'io, andramo indray ny mpizara indray.
Antony iray hafa mety tsy manomboka ny kalkadera dia ny Windows User Account Control (UAC) Windows 10, miezaka mamela azy - Ahoana no ahafahana mampiasa sy mamafa ny UAC amin'ny Windows 10.
Raha toa ka tsy miasa izany, ary koa ny olana mitranga dia tsy ny solosaina ihany no azonao atao, fa koa miaraka amin'ny fampiharana hafa, dia azonao atao ny manandrana ireo fomba ambaranao ao amin'ny boky. Ny fampiharana Windows 10 dia tsy manomboka (mariho fa ny fomba hamerenana ny fampiharana Windows 10 amin'ny PowerShell indraindray dia mitodika amin'ny mifanohitra amin'izany ny valiny - tapaka ny fampiharana).
Raha toa ka karazana karazana karazana tsy dia mahazatra na tsy mahazatra ao amin'ny Windows 10 ianao, dia azonao atao ny mametraka ny dikan-teny taloha momba ny calculator. Hatramin'ny vao haingana, ny Microsoft Calculator Plus dia azo alefa amin'ny tranonkala ofisialin'ny Microsoft, fa amin'izao fotoana izao dia nesorina tao izy ary tsy hita afa-tsy tao amin'ny tranonkalan'ny olon-kafa, ary hafa kely noho ilay kodia Windows 7.
Raha te-ahafahana mandefa ilay takelaka taloha, azonao atao ny mampiasa ny tranonkalany //winaero.com/download.php?view.1795 (ampiasao ny Calculator Old Download ho an'ny Windows 10 avy amin'ny Windows 7 na Windows 8 eo amin'ny faran'ny pejy). Raha ny marina, jereo ny fametrahana ny VirusTotal.com (amin'ny fotoana hanoratana ity, madio avokoa ny zava-drehetra).
Na dia eo aza ny habaka amin'ny teny Anglisy, ny rafitra rosiana dia naverina amin'ny teny Rosiana ary ny kalkulator dia ampiasaina amin'ny Windows 10 (ohatra, raha manana fanalahidy iray manokana eo amin'ny klavier ianao mba hanombohana ny calculer, dia manomboka izany old version).
Izay ihany. Manantena aho fa ho an'ny mpamaky sasany dia ilaina ny fampianarana.